मङ्लबार, साउन १२, २०७८
’ए’ डिभिजन लिग: च्यासल युथ क्लबको चौथो जित,ब्रिगेड ब्वाईज २–० ले पराजित
काठमाडौ । च्यासल युथ क्लबले पल्सर सहिद स्मारक ’ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा चौथो जित निकालेको छ । शनिवार भएको खेलमा ब्रिगेड ब्वाईजलाई २–० ले पराजित गर्दै च्यासलले चौथो जित निकालेको हो । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा च्यासललाई जित दिलाउन सन्त बहादुर गुरुङ र संजोक राईले एक एक गोल गरे । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको […]
ए डिभिजन लिगः संकटाको मनाङसँग अंक बराबरी
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत विहीबारबाट आठौं चरणका खेल शुरु भए । विहीबार तीन वटा खेल भएका थिए । जसमा संकटा क्लवले सातौं जित निकालेको छ । संकटाले हिमालयन शेर्पालाई दुई शुन्यले हरायो । जसकाकारण उसले लिगको शिर्ष स्थानमा रहेको मनाङसँग अंक बराबरी गर्न सफल भयो । सातदोबाटो स्थित एन्फा […]
शुक्रबार, मंसिर २८, २०७५
पहिलो जितको खोजीमा चितवन र पोखरा
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)अन्तर्गत शुक्रबार दुई खेल हुँदैछन् । चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सको सामना गर्दैछ भने अर्को खेलमा पोखरा राइनोजले शुक्रबारै काठमाडौं किंग्सको सामना गर्नेछ । चितवन र पोखराले अहिलेसम्म कुनै पनि खेलमा जित हात पार्न सकेका छैनन् । त्यसैले शुक्रबारको खेलमा जित हात पार्दै अंक तालिकामा अंक चढाउने दाउमा देखिएका […]
ज्ञानेन्द्रलाई ट्वीस्टरको साथ
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई क्रिकेट सामग्री निर्माण कम्पनी ट्वीस्टरले दुई वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने भएको छ । नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्रलाई ट्वीस्टरले क्रिकेट सामाग्री र नगद गरी २ वर्षका लागि १६ लाख (वार्षिक ८ लाख ) रुपैयाँ बराबरको प्रायोजन गरेको हो । बिहीबार ट्वीस्टरका प्रतिनिधि केयुर देसाई र ज्ञानेन्द्रले प्रायोजन […]
अपराजित यात्राको खाेजीमा पारस, शरद र सोमपाल
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपीएल अन्तर्गत आज पनि २ वटा खेल हुनेछन् । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा विहान ९ बजे हुने खेलमा भैरहवा ग्लाडियटर्स र विराटनगर वारियर्स भिड्ने छन् । दुवै टिम अपराजित रहेकाले आजको खेल दुवै टिमका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको विराटनगरले उद्घाटन खेलमा ललितपुरलाई पराजित गरेको […]
बुधबार, मंसिर २६, २०७५
लिटिल एन्जल्स र मोर्डन इन्डियन सेमिफाइनलमा
काठमाडौं । लिटिल एन्जस स्कुल (एलए) हात्तीवन र मोर्डन इन्डियन स्कुल चोभार २३औं फादर मोरान स्मृति आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । यससँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ । सोमबार आयोजक सेन्ट जेभियर स्कुल र झापाको मोरान मेमोरियल स्कुलले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको थियो । गोदावारीस्थित जेभियरको मैदानमा मंगलबार भएको पहिलो […]
पोखरा राइनोज विराटनगर वारियर्ससँग सुपर ओभरमा ७ रनले पराजित
काठमाडौं । ईपीएल लिगमा पोखरा राइनोज विराटनगर वारियर्ससँग सुपर ओभरमा ७ रनले पराजित भएको छ । प्रतियोगितामा पोखराको यो लगातार तेस्रो हार हो भने विराटनगरको लगातार दोस्रो जित हो । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदा ८४ रन मात्र बनाएको थियो । ५ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको […]
मङ्लबार, मंसिर २५, २०७५
पाइलट रिजालद्वारा क्रिकेट सामाग्री उपहार
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन तथा समाजसेवी श्रवण रिजालले क्रिकेटका एक जना उदीयमान खेलाडी छात्रलाई क्रिकेट सिक्नको लागि क्रिकेट एकेडेमीमा भर्ना गरिदिनुको साथै क्रिकेट सामाग्री समेत उपहार दिएका छन् । पत्रकार एव्म स्काउट शिक्षक बलराम प्यासीको पहलमा रिजालले राजधानीको सिनामंगलस्थित शिक्षान्तर स्कूलमा ८ कक्षामा अध्ययनरत तीनकुने निवासी विद्यार्थी कपिल भण्डारीलाई क्रिकेट खेल्नको […]
ए डिभिजन लिगः सातौं चरणका खेल सम्पन्न, मनाङलाई पछ्याउँदै थ्रीस्टार र संकटा
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी ए डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार भएका दुई खेलको समाप्तिसँगै सातौं चरणका खेल समापन भएका छन् । सातौं चरणका खेल सकिंदासम्म अंक तालिकामा मनाङ–मस्र्याङ्दी शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने उसलाई थ्रीस्टारले पछ्याइरहेको छ । सातौं चरणको अन्तिम खेलमा मनाङ र आर्मीले जित हात पारे । लगको तेस्रो चरणदेखि लगातार अग्रतामा रहेको मनाङले […]
ए डिभिजन लिगः मनाङ र आर्मीको विजय
काठमाडौं । जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा मनाङ मस्र्याङदी र आर्मी बिजयी भएका छन । सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा सम्पन्न खेलमा आर्मीले ब्रिगेड ब्याइज र मनाङले मच्छिन्द्रलाई पराजित गरेको हो । सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा भएको दोश्रो खेलमा मनाङ मस्र्याङदी क्लवले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राख्न सफल भयो । खेलमा मनाङले मच्छिन्द्र […]
सोमवार, मंसिर २४, २०७५
पहिरो पीडितलाई गाँस र बासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरण पेचिलो बन्दै
जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय
पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष
विदेश जानेहरुले अब सैनिक र प्रहरी अस्पतालबाट कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन पाउने
काठमाडौँ उपत्यकामा थप ९९९ जनामा कोरोना संक्रमण
नेपालमा थप ३ हजार ४२१ जनामा कोरोना संक्रमण, २५ को मृत्यु
चैतसम्म ३ करोड २३ लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी
आयोगले पार्टी विभाजन गराएको राजेन्द्र महतोको आरोप
हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु
इलाममा छोराको कुटाइबाट बाबुको मृत्यु
बागलुङमा ओढारमा भेटियो २२ नाल भरुवा बन्दुक
एमाले विवादएकहप्ता भित्र छिनोफानो : प्रवक्ता ज्ञवाली
बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार ?
इजरायलबाट एक हजार कामदारको माग, क-कसले जान पाउने ?
जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खोल्ने तयारी
सरकारी गाडीभित्र यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ
१६० किलोमिटर प्रतिघण्टा स्पीडको ट्रेनबाट चालक बाहिरिए
नाबालक छोराकी १९ बर्षे आमालाई ट्रक भित्रै ४ दिनसम्म ४ जनाद्धारा पटक पटक बलात्कार (भिडियो रिपोर्ट)
भटमास र सूर्यमुखी कच्चा तेलको मूल्य घट्यो
बालुवाटारको सुरक्षा टोली बूढानिलकण्ठतिर
नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा
चार छात्रालाई लगातार पाँच वर्ष यौन दुर्व्यवहार
कस्ता व्यक्तिले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन मिल्दैन ?
हामी १५ औँ वर्षमा
ओलीको आदेशमा खाजा खर्च मात्रै ४ करोड
जसले मलाई बचाऊ भन्दै रुँदै फोन गरेकी थिइन्
९ दिनदेखि बेपत्ता युवतीको शव जंगलमा भेटियो
ओली र माधवबीच तुलना हुन सक्दैनः प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १० दिन थप, लामो दूरीका यातायात चल्ने
गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउछौंः मन्त्री भुसाल
बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ